हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवनरक्षा - सुनाखरी न्युज
Posted on: July 27, 2021 - 2:22 pm
नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकको जीवनरक्षा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले सरकार अनि राज्य प्रणालीको सुरुवात नै नागरिकको जीवनरक्षाका लागि भएको र शासन व्यवस्थाभित्रको नागरिकको जीवनरक्षा नै आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताए । गृहमन्त्री खाँडसँग गरिएको कुराकानीको सार:
तपाईंका प्राथमिकताहरू के–के हुन् ?
पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवनरक्षा हो । किनकि यो राज्य प्रणालीको दुनियाँमा प्रादुर्भाव किन भयो, सरकार किन बन्यो, समुदायमा हामी किन बस्यौँ भन्दा हाम्रो जीवनरक्षाका लागि हो । मान्छेले आफ्नो जीवनरक्षाका लागि मान्छे मान्छेसँग मिलेर समुदाय बनायो, राज्य प्रणालीमा सुरुवात ग¥यो । जुनसुकै सरकारले पनि मेरो शासन व्यवस्थाभित्रको नागरिकको जीवनरक्षा मेरो पहिलो दायित्व हो, कुनै पनि नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो मूल प्राथमिकता हो । त्यस कारणले विभिन्न घटना–परिघटनाबाट मान्छेको ज्यान जाने कुरा होस्, चाहे यो कोरोना महामारीबाट मान्छेको ज्यान जाने कुरा होस्, संक्रमणका कारणले, जुन खालको हाम्रो अर्थव्यवस्था पनि थिलथिलो भएको छ, यसैलाई नै हामीले प्राथमिकताका साथ अगाडि लाने हो । गृह मन्त्रालयका थुप्रै कार्यक्षेत्रहरू छन् । त्यसलाई पनि हामीले परिष्कृत गर्दै राम्रो गराउँदै जाने हो ।
मुलुकको शान्ति सुरक्षा ब्यवस्थालाई कसरी प्रभावकारी वनाउनुहुन्छ ?
मैले हालै मात्रै विभिन्न सुरक्षा अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छु । उहाँहरूले यो मन्त्रालयको सांगठनिक ढाँचा, यसको काम, कर्तव्य, कार्यक्षेत्रका बारेमा जानकारी गराउनुभयो । मैले आफ्नो अनुभव र उहाँले जानकारी गराएको कुराहरूमा आफ्ना धारणा राखें र सबैलाई धन्यवाद दिएँ । त्यसपछि यो मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा निकायहरूसँग आफ्नो–आफ्नो निकायमै छलफल हुन्छ । त्यसपछि विभिन्न तहगत विभागहरू छन्, उनीहरूसँग पनि छलफल हुन्छ । अहिले खाली मैले पदबहाली गरें । सचिवजीले यहाँको स्थितिका बारेमा र यसको सांगठनिक ढाँचाका बारेमा, काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिकाका बारेमा, केही समस्या र चुनौतीहरूको बारेमा ब्रिफ गर्नुभयो ।
कोभिड महामारीमा अग्रभागमा खटिएका सुरक्षा निकायलाई दिने भनेको भत्ता अहिलेसम्म पनि नपाएको अवस्था छ । यसबारेमा के गर्नुहुन्छ ?
कोभिड महामारीमा सुरक्षा निकाय र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू खटिनुपरेको छ । जनताको सुरक्षाका लागि पनि सरकारको प्रतिबद्धता छ । सबैलाई भ्याक्सिन छिटोभन्दा छिटो लगाउने, सबैको उपचार गर्ने, सबै संक्रमितहरूको जीवन बचाउँ, त्यसका लागि सरकार दत्तचित्त छ । त्यसका साथसाथै फ्रन्टलाइनमा बस्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरूको जीवनरक्षाको दायित्व पनि सरकारको हो । मन्त्रालयको हो । विभागको हो । त्यतापट्टि पनि हामी गम्भीर छौँ । उहाँहरू संक्रमित नहुनुहोस् । त्यसका लागि आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, आवश्यक प्रशिक्षण दिने, आवश्यक भ्याक्सिनहरू दिने, संक्रमित भइहाल्यो भने ती सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकको पनि जीवनरक्षा गर्ने, तिनको पनि उपचार गर्ने दायित्व हाम्रो हो भनेका छौँ । त्यसका लागि मैले उहाँहरूसँग ब्रिफिङमा पनि भनेको छु कि राम्रो कामको लागि सराहना गर्छु र तपाईंहरूको जीवनरक्षाका लागि सरकार साथमा छ । मन्त्रालय तपाईंहरूको साथमा छ । उहाँहरूलाई उत्साहित र प्रोत्साहित गर्ने काम गर्छौं ।
सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापनाको कार्य आक्रामक ढंगले अघि बढिरहेको छ । यसमा तपाईंको प्राथमिकता के रहन्छ ?
बीओपीका बारेमा, नेपालको भूमिको रक्षा गर्ने काम हाम्रो हो । सरकारको हो । नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो । बीओपीले राष्ट्रिय भूमिको रक्षा र नागरिकको रक्षामा मद्दत पु¥याउँछ भन्ने नै हामी सबैको विश्वास हो र त्यसले निरन्तरता पाउँछ । जहाँसम्म सरुवा, बढुवाको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा कार्यक्षमताकै आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । एउटा सामान्य नागरिकले पनि के भन्छ भने यसले राम्रो जनताको मन जित्ने काम गरेको छ । जनतालाई सम्मानित गर्दै आफ्ना कामहरू सम्पन्न गरेको छ भने कतिपय जिल्लामा सिडियोलाई, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई, पुलिस प्रशासकलाई अभिनन्दन गरेर खाँदा र मालाले ढाकेर पठाइदिएका पनि छन्, सम्मान गरेर बिदाइ हुने बेलामा । कतिपय ठाउँमा साटाक सुटुक हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यो सन्तुलन मिलाएरै गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले यसमा अध्ययन गर्नै बाँकी छ ।